Wararka - Waa maxay 3D taxane ah?
Lihua WPC 3D Embossed Composite Decking waa sheyga decking tiknoolajiyada cusub, ama waxaad ugu yeeri kartaa qoto dheer xardhan ama super embossed. Tiknoolajiyada ugu weyn waa habka qoto dheer ee la isku qurxiyo inta lagu jiro wax soo saarka.
Tiknoolajiyad cusub 3D oo xardhaysa WPC dabaqa qurxinta banaanka, hagaajinta qurxinta. Tiknoolajiyada wax lagu duubo ee 3D waa farsamo xardho oo dusha sare ah. Dabaq kasta wuxuu la mid yahay farshaxan, jawiga farshaxanka iyo shahaadada muuqaalka ayaa si weyn loo hagaajiyay. Kordhinta 3D-ga 'Classical 3D' waa horumarin weyn oo lagu arkay dabaqyada alwaax-caag ah, oo kaliya laguma xardhi karo baandooyinka laakiin sidoo kale waxay taageeri karaan raadadka bilowga ciyey.
Dabaqa 3aad ee qoryaha embossinging wuxuu gaarayaa 3 mm, taas oo si cad u xoojin karta awooda xayeysiinta ee dabaqa. Marka loo barbardhigo xayeysiinta tooska ah ee dusha sare ee jeexjeexa, jihada xayeysiinta ee dusha sare ee 3D wax badan baa ka duwan.
Faa'iidooyinka 3D embossed
Qurxinta wpc-ga caadiga ah way fududahay in lagu lumiyo hadhuudhka dusha sare, decking super embossed waxay ka fiicnaataa alwaax kasta oo isku dhafan, waa mid dabiici ah oo soo jiidasho leh, way sii fiicnaanaysaa oo xoqaysaa isla markaana xoqaysaa.
Lihua's super embossed WPC decking waxay leeyihiin dhammaan faa'iidooyinka qurxinta isku dhafan ee dhaqameed, wali waa la hayaa: biyo la'aan, anti-UV, u adkaysiga cimilada, ka hortagga daxalka, ka hortagga cayayaanka, dayactirka hooseeya, adeegga muddada dheer iwm. waxaad dareentaa inbadan sida alwaax dabiici ah sababtoo ah daaweynta embossing 3D ee dusha sare.
Shirkaddayadu waxay leedahay dhowr qaab oo super embossing ah oo aad adigu u tagto, sida qoryaha masduulaaga ah iyo qoryaha jajaban, kuwaas oo ah kuwa ugu caansan suuqa. Midabku waa la habeeyay, iyada oo aan loo eegayn geedkii, kafeega, walnut, shukulaatada ama haddii kale, waxaan kuu sameyn karnaa mid aad rabto.
Xulashada midabka ee warshada Lihua WPC
Iyo ku dhowaad dhammaan midabka caadiga ah ee aan bixin karno, haddii aad rabto inaad wax gaar ah sameyso, waad noo soo diri kartaa shaybaarkaaga, waxaan sameyn karnaa sida muunaddaada, tani waxay ku siin doontaa adiga iyo macaamiishaada xulasho dheeraad ah.
Gogosha WPC, alwaax decking isku dhafan, Qurxinta banaanka ee WPC, Qurxinta WPC, Bannaanka WPC decking, Dabaqa WPC,